दोहोरीमा जम्दै राजु केसी • Pokhara News by Ganthan
दोहोरीमा जम्दै राजु केसी
प्रकाशित ५ श्रावण २०७३, बुधबार १५:३२
पोखरा, ५ साउन /नेपालमा दोहोरी गीतलाई मौलिक संस्कृतिको रुपमा लिने गरिन्छ । गाउँघर तिर अझै पनि पुजाआजा, बर्तबन्ध या अन्य कुनै कार्यमा पनि रातभर भजन गाउने प्रचलन छ । भजन मात्रै हैन भजन सँग दोहोरी पनि जोडिएर आउछ । हाल दोहोरी व्यवसायिक पेशा पनि बनेको छ ।
विभिन्न मेला महोत्सवहरुमा प्रतियोगिता पनि हुने गर्दछ । प्रतियोगिता हार जितको खेल हो । यसमा कति सफल हुन्छन् भने कति असफल, यस्तै असफलताको बिच सफलता पछ्याउने एक दोहोरी गाएक हुन् राजु के.सी. । स्याङ्जाको बाँयटारीमा जन्मनु भएका राजु के.सीले वि.स २०६१ सालबाट निरन्तर दोहोरी गीत प्रतियोगिता अनबरत रुपमा लागि परेर थुप्रै सफलता हाँसिल गरिसक्नु भएको छ ।
चाहे त्यो पाल्पाको महोत्सव होस् चाहे बुटवल, बाग्लुङ् पोखरा काठमाण्डौ या देशका अन्य जुन कुनै कुनाको महोत्सव भएपनि के.सी. प्रतियोगितामा भाग लिन पुगेकै हुन्छन् । उनी प्रतियोगितामा भाग लिदै हिड्दाका पलहरु स्मरण गर्दै भन्छन् पहिला पहिला त जति नै राम्रो गाए पनि हार्थे । मलाई राम्रै गाए झै लाउथ्यो । तर मेसोमेलो मिल्दो रैनछ । वि.स २०६३ सालमा धोका देकै हो नामक गित उनको सङ्गीतिक जगत्को पहिलो साङ्गीतिक प्रस्तुती थियो । त्यस्तै हालै मात्र मलाई नराख अब भरम्मा र थाह छ माया थाह छ नामक गीत बजारमा ल्याउने तयारीमा छन् भने आधा दर्जन बढि गीतमा शब्द सृजना गरेका छन् ।
राष्ट्रिय लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले गरेको राष्ट्रव्यापी अन्तर दोहोरी साँझ स्तरिय दोहोरी गीत प्रतियोगितामा उनी दुई वर्ष लगातार प्रथम स्थान हाँसिल गरेका छन् । यस्तै अनुभवको आधारमा के.सी भन्छन् – अब त मलाई केही कुरामापनि डर लाग्न छोडि सक्यो । जस्तो सुकै विषय होस् प्रशङ्ग होस म निर्धक्क गाउन सक्छु । एकातिर उनको सफलता कायम रहिरहदा उनी खुशी व्यक्त गर्छन् भने अर्को तिर यस क्षेत्रमा आएको विकृतिले मन खिन्न बनाएको बताउछन् । उनी भन्छन् – दोहोरी गाउँघरको जुनकुनै पाखामा गाएर पनि दुई हातको तालिमा पनि गाउन सकिन्छ ।
तर दोहोरी गाउन जो कोहिले सक्दैन । किनकी अर्को पक्षको कुरा सुनेर आफुले प्रति उत्तर दिन सक्नु नै दोहोरीको मुल विशेषता हो । हाल दोहोरीमा प्रयोग गरिने उत्शृङ्खल शब्दहरुले मनै खीन्न बनाएको छ । यदि यसलाई रोक्न सकिएन भने हाम्रा भावी पुस्ताले दोहोरी देख्न, सुन्न नपाउन पनि सक्छन् । त्यसैले दोहोरी, दोहोरी नै ठीक छ फोहोरी बन्नु हुदैन । पछिल्लो समयमा राजु के.सी नाम सुन्ने बित्तिकै प्रतियोगितामा भाग लिन आउने जो कोहि सर्तक हुने गर्दछन् । यसैको प्रतिफल उनले विभिन्न सम्मानहरु पनि पाएका छन् । राष्ट्रिय लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल उपत्यका समन्वय समितिले आयोजना गरेको चौथो बायो लोक दोहोरी अवार्ड सँगै भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल जिल्ला कार्य समिति स्याङ्जा तथा अञ्चल कार्य समिति गण्डकी बाट पनि उनी सम्मानित भइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय मावि र जनप्रियले जित्यो सृजना कपको उपाधि ५ श्रावण २०७३, बुधबार १५:३२
तनहुँमा सवारी दुर्घटना हुदाँ पैदलयात्रीको मृत्यु ५ श्रावण २०७३, बुधबार १५:३२
आहा राराको १८ औं संस्करणमा पुरस्कार राशी बढ्यो ५ श्रावण २०७३, बुधबार १५:३२
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीले चन्द्र ढकाललाई सर्मथन गर्ने ५ श्रावण २०७३, बुधबार १५:३२
सिंगापुर प्रहरीबाट फर्किए पछि सिंगोर्खा सेक्युरिटी सञ्चालन ५ श्रावण २०७३, बुधबार १५:३२
पोखराको फुलबारीमा स्कुटर दुर्घटना हुदाँ एकको मृत्यु ५ श्रावण २०७३, बुधबार १५:३२
भारतीय सहरमा पोखरा प्रवद्र्धन ५ श्रावण २०७३, बुधबार १५:३२
पोखरामा कार सडकमै पल्टियो, एक जनाको मृत्यु ५ श्रावण २०७३, बुधबार १५:३२
नेपाल भ्रमर्ण वर्षलाई लक्ष्त गर्दै अन्नपूर्ण क्षेत्रमा थप चारवटा पदमार्ग ५ श्रावण २०७३, बुधबार १५:३२
सिद्धबराह मन्दिरमा १०८ फिटको हनुमान मूर्ति स्थापना गर्न शिलान्यास ५ श्रावण २०७३, बुधबार १५:३२
५ फाल्गुन २०७६, सोमबार १७:२४